तीजको व्रत र पोइटिङ्ग्रे: इन्दिरा प्रसाई « LiveMandu
१४ भाद्र २०७६, शनिबार २१:२८
मेरी आमा दुर्गादेवी नेपालको १० वर्षको उमेरमा बिहे भएको थियो । तर बिहे हुनु अघिदेखि नै मेरी आमाले हुनेवाला पतिको दीर्घ जीवनका लागि व्रत बस्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मैले आमाबाटै सुनेकी हुँ। निष्ठा र समर्पण पूर्वक उहाँद्वारा लिइने गरिएको व्रत र देउताको प्रभाव चाहिं उल्टो परेको थियो । अर्थात् मेरा बुबा गणेशप्रसाद नेपाललाई आमाले पुजेका र विश्वास गरेका देउताले ५० वर्षीय मेरी आमालाई एकल बनाउँदै ५६ वर्षका मेरा बुबालाई चाहिँ स्वर्गवासी बनाई दिएका थिए ।
तीजको दर खानुको मनोविज्ञान पनि त्यस बेलाको आर्थिक समाजिक दरिद्रीसँग गाँसिएको म पाउँछु । बिहे गरेर पठाइएको घरमा वर्षदिनसम्म मधेसका गोरूलाई दिएजस्तै सास्ती दिँदै ढिँढो फ्याप्लो मात्र खान दिइएका चेलीलाई माइत झिकाइन्थ्यो । अनि ती माइत आएकी चेलीलाई एक छाक मीठो खान दिएर, एक धरो नयाँ लाउन दिने चलन त चलाइएको थियो । त्यसरी वर्षमा एक पटक माइत जान पाइन्छ र माइत गएपछि राम्रो नाना र मीठो खान पाइन्छ भन्ने लोभ र मोहमा ती निरीह नारी घर भन्ने दारूण शासन गरिने ठाउँमा बँधुवा मजदुर सरह भोकै प्यासै खट्ने गर्थे । त्यस्ता निरीह आईमाईको प्राण धारण गर्न र मानस बचाउन त्यस बेलाको सामाजिक जुक्ति थियो तीजको दर ।
तर यत्ति कुरा चाहिँ मैले भन्नै पर्छ, हिँजोआज आफ्नै हातमा डाडुपन्यू भएका, बाह्रै महिना मुखबाट नभए नाकबाट भए नि खाँदा खाँदा अति पोषणको रोग लागेका र रोग लाग्ने तरखरमा भएका आईमाईहरूले एक दिनको दर संस्कृति वा दर संस्कारको रमाइलो मनाउनुको साटो महिना दिन भन्दा लामो तीजको दर क्याटरिङमा चलाउनु भनेको चाहिँ ‘विरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नु’ जस्तै भएको छ । जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेला आफूलाई मनपरेका कपडा खरिद गर्न सक्ने र आलमारीमा राखिनसक्नु कपडा र आँटिनसक्नु सामाग्री भएकाहरूबाट आफ्नो देशमा निर्माण हुन नसक्ने चुरा र पोतेहरू, लत्ता कपडाजन्य विविध सामाग्रीको अनिवार्य क्रयका कारण देशको आयात वृद्धिको अप्रत्यक्ष अपराध गरिएको छ । अर्कातिर महङ्गिएको बजारमा अनर्गल खरिद प्रक्रियाले अनावश्यक खर्च बढाएर आर्थिक अपराधिकरण तर्फ समाजलाई धकेल्ने काम पनि भइरहेको छ । यस बढ्दो विलासितापूर्णको तीजको प्रचलनले समाजको विकास होइन विनास पक्कै गर्ने छ । त्यसैले तीजको दरलाई उच्छ्रिँखलता र विलासितापूर्ण नबनाएर सृजनात्मक रूपले स्वस्थ्य मनोरञ्जन तथा शान्त र शालिन आचरणमा मनाउने बेला बित्नै लागेको महसुस गर्दैछु ।
वाल्यकालदेखि मैले देखेको आफू भोकै बसेर लोग्नेको दीर्घ जीवन माग्दै व्रत बस्ने कुरा भने मलाई जच्नै सकेन र पचेको पनि थिएन ।
‘लोग्नेको दीर्घ जीवनका लागि स्वास्नीले व्रत बस्ने’ यो कसरी सम्भव हुनसक्छ ? अनि त्यसरी व्रत बस्ने आईमाईका लोग्नेले खोई त दीर्घ जीवन पाएका ? यस्ता प्रश्नले मेरो मस्तिष्क रन्थनाउने गर्थ्यो । समाजको अन्धो दौडमा म लागि पर्न सक्तिनथेँ र विद्रोहै गर्ने हिम्मत पनि मसँग थिएन । म पनि धर्मभिरूताले नै ग्रस्त नै थिएँ र अहिलेसम्म पनि त्यसबाट पूर्णतया उम्कन सकेकी छैन् ।
यसरी बाहिर विद्रोही भएर देखा पर्न नसके पनि म मौन विद्रोहमा भने रहिरहेँ । तर मेरो विद्रोह भनेको पनि तर्कका साथ औचित्यको खोजी गर्नु थियो ।
त्यसैले यस विषयमा म मानसिक रूपले खोजी र अनुसन्धानमा लागिरहेँ र लागिरहेकै पनि छु ।
मेरी आमा दुर्गादेवी नेपालको १० वर्षको उमेरमा बिहे भएको थियो । तर बिहे हुनु अघिदेखि नै मेरी आमाले हुनेवाला पतिको दीर्घ जीवनका लागि व्रत बस्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मैले आमाबाटै सुनेकी हुँ। निष्ठा र समर्पण पूर्वक उहाँद्वारा लिइने गरिएको व्रत र देउताको प्रभाव चाहिं उल्टो परेको थियो । अर्थात् मेरा बुबा गणेशप्रसाद नेपाललाई आमाले पुजेका र विश्वास गरेका देउताले ५० वर्षीय मेरी आमालाई एकल बनाउँदै ५६ वर्षका मेरा बुबालाई चाहिँ स्वर्गवासी बनाई दिएका थिए । दस किसिमका शल्य चिकित्सा खेपिसकेकी ८२ वर्षीय मेरी आमालाई भने परमात्माले हाम्रा लागि यसै धरामा राखेकै छन् ।
त्यसै गरेर ७ वर्षकै उमेरमा ७ वर्षकै वरसँग बिहे भएर १३ वर्षको उमेरदेखि दाम्पत्य सम्बन्ध सँगाल्न पुगेकी मेरी सासूले पनि हरितालिका तीजको व्रत बस्ने क्रममा आफ्नो सम्पूर्ण समर्पण र निष्ठा महादेवलाई सुम्पेर पतिको दीर्घ जीवन माग्नु भएको थियो । यहाँ पनि व्रतको प्रभाव उल्टै भएको थियो । अर्थात् मेरी सासू भागीरथा प्रसाईलाई पनि ४० वर्षकै उमेरमा एकल महिला बनाएर मेरा ससुरा जयप्रसाद प्रसाई पनि स्वर्गतिरै प्रस्थान गर्नु भएको थियो । मेरी सासू स्वयमले चाहीँ ९३ वर्षको दीर्घ जीवन बाँच्न पाउनु भएको थियो ।
मैले देखेका साक्षत् उदाहरण बाहेक पनि मसँग मेरा नाता कुटुम्ब, इष्ट मित्र लगायतका महिलाहरूको लामै नामावली छ । जसले अत्यन्त निष्ठापूर्वक हरितालिका तीजको व्रत पनि बसे र असमय मै पतिलाई चाहीँ स्वर्ग तिर पठाएका थिए तर आफूहरूले भने दीर्घ जीवन पाएका थिए र छन् पनि ।
हामीलाई संस्कृत नपढाइएको कारण पनि र हाम्रा विद्वानहरूले हाम्रो वेदादी शास्त्रमा लेखिएका हाम्रो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुराहरू उजागार नगरी दिनाले पनि योसिमोरीजस्ता परदेशी विद्वानले हामीलाई हाम्रै शास्त्रका कुरा बुझाई दिनु पर्छ अनि मात्र हामीले बुझ्ने गर्छौँ । हाम्रा जडीबुटी विदेशीले सित्तैँमा लगेर हामीलाई महङ्गोमा औषधी बेचे झैँ । मैले पनि यी जापानी वैज्ञानिक योसिमोरीले प्रमाणीकरण गरेपछिमात्र निराहर रहेर व्रत बस्नुको अर्थ बुझेँ ।
योसिमोरीको अनुसन्धानबारे जानकारी पाइसकेपछि मलाई लाग्यो हरितालिका तीज मातृसत्ताको अवशेष रहेछ कि क्या हो? किनकी पितृसत्ताले आईमाईलाई लोग्ने बँचाउने कुरा नसिकाएर आईमाई स्वस्थ्य र दीर्घ जीवन हुने कुरा कसरी र किन सिकायो होला ? अहिले यी प्रश्न पनि थाँती नै राखौँ । कुनै बेला पर्गेलौँला!
हाम्रामा पनि निराहर व्रत बस्नेहरू (महिला) नै दीर्घजिवी देखिएको प्रसङ्ग त प्रस्तुत गरी नै सकेकी छु।